Chelsea Oo Gool Uga Adkaatay Barcelona Iyo Drogba Oo Noqday Halyeygii Stamford Bridge
Chelsea ayaa 1 gool uga adkaatay kooxda reer Spain ee Barcelona oo u muuqatay koox iska qasaarisay fursado badan oo ay goolal ku dhalin kartay, laakiin gabagabadii waxaa dhoola cadeyn garoonka uga baxay gool dhaliye Drogba iyo kooxdiisa Chelsea.
Ciyaartan oo inta badan ahayd sidii la wada sugayay, kin Barcelona kubada haysato wax badan iyo in Chelsea ka faa'iideysato fursadaha dhabar jebinta marka inta ay Barca ku mashquulsantahay kubad wareejinta, qeybtii hore ee ciyaarta dhamaadkeedii ayuu Drogba shabaqa la helay kubad uu si xariifnima ah ugu soo dhiibay Ramires.
Dhamaadki ciyaarta ayey Barcelona heshay fursadii ugu qaalisaneyd oo ay birta iyo banaanka garaaceen sidaasna usku dhiibeen oo uu garsooruhu ka dhawaajiyay seerigii dhamaadka.
Chelsea ayaa noqoneysa kooxdii ugu horeysay ee Barcelona ku garaacdo muddo aad u dheer, laakiin natiijada ah hal gool kaliya ayaa dad badani shaki ka qabaan inay u sahlanaan doonto soo bixida Finalka sanadkan, sababta ayeyna u daliishanayaan guriga Barcelona oo inta badan kooxdani ku dhaliso goolal badan, inkasta oo ay Chelsea haysato difaac adag waa haduu isku xirnaan muujiyo.
Waa guuldaradii 2aad oo 24 saac gudahood xabadka loo galiyo kooxihii reer Spain oo midna xalay Bayern kasoo adkaatay, midna Chelsea ka badisay, waxaana la hubaa in kulamada 2aad ee ka kala dhici doona Madrid iyo Barcelona noqon doonaan kuwo aad ugu muhiim ah dhamaan afartaan koox oo mid waliba jeceshahay inay soo gaarto finalka sanadkan oo lagu qabanayo magaalada iyo garoonka Bayern Munich.
Wixii natiijo iyo faalooyin ku saabsan koonkan Yurub kala soco qoraaladeena danbe insha allaah
Goolasha labadan kulana saacadaha soo socda filo.